6 Qalad Oo Ay Sameeyaan Gabdhaha Guurka Ku Cusub Oo Sababa Durbadiiba In La Furo - Daryeel Magazine
6 Qalad Oo Ay Sameeyaan Gabdhaha Guurka Ku Cusub Oo Sababa Durbadiiba In La Furo
Arrimo Hore: Waxaa dhici karta inaad ka sheekayso arrimahaagii hore, tusaale ahaan nin hada ka hor ku soo doonay, mid aad la sheekaysan jirtay, nin ku jeclaa iwm. iska ilaali arintaan waa halis waxayna sababi karaan burbur qoys.
Maslaxada iyo wanaaga: Waxaa jira dumar ka war-wareega inay wanaaga iyo maslaxada bilaabaan iyagoo ka suga in ninku bilaabo. Hadaba gabaryahay mar walba isku day in aad maslaxada iyo wanaaga bilowdo oo aad iska saarto diiqada iyo cadhada hana ka dhigin in ay sii joogto cadhadaasi soona af jar oo xali mushkilada hala sugin bari iyo hadhow iyo hebel in tay ayna faraha ka bixin xali oo dhamee arinta ha is odhan walaal asaga ayaa nin ah muu bilaabo asagu maslaxada oo afka ha buurin kiiskana ha iska sii waalin reerka.
-Xalka oo ay u doonato saaxiibadeed iyo jaarka: isku day inaad xaliso mushkilada iyo arrimaha gurigaaga hana la aadin saaxiibadaada, jaarka iwm.
-Bixitaanka badan: waxaa laga yabaa inaad jeceshahay inaad aado aroos kasta iyo xaflad kasta. Hadaba daryeelmagazine.com ayaa ku leh ogoow marwo ayaad noqotay masuuliyad ayaa hada ku saaran hadaad awal xafladaha arooska aadi jirtay hada waa inaad iska daysaa wixii aan munaasib ahayn. Ogoowna maqnaashaha badan inuu keeni karo dhib weyn.
-Qar-qarinta: Ha qarqarin wax idiin dhaxeeya oo ha ka qarsan sirahaaga hadii uu ogaado dhib aad u waynbaa ka dhalan karta ee ogoow taas.
Is Qurxinta: Waxaa jira dumar markay meel aadayaan marsada waxyaabaha la isku qurxiyo, xirta labiska ugu qurxoon, aad isku carfiya balse markay nimankooda la joogaan aan waxba isku qurxin kulana jooga dharkii ay jikada kula jireen. Arintaan ma sahlana gabaryahay ka digtoow isagaa mudan oo xaq u leh inaad isku qurxiso.
Arrimo Gabadha la Gudboon ka Hor Go’aanka Guurka Asal Guurka Afka Hooyo Iyo Habacsananta u Hiilimtiisa 20 Qalad Oo Keeni Kara Fashilka Ganacsi Ama Shirkad Talooyin Xikmadaysan Oo Ku Socda Gabdhaha